Ambongadiny alika fikolokoloana Titanium Coating manify hety Pet Chunkers mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Dog Grooming Titanium Coating manify hety Pet Chunkers
Modely ： UF2-7018T
Size: 7,0 santimetatra, nify 18
Loko ： Volafotsy ， Mainty
● Hety fikolokoloana biby fiompy natao ho an'ny tànana ankavanana. Mety amin'ny fanapahana haingana ny volo mavesatra ho an'ny biby fiompy. Ireo chunker dia ampiasaina hamita na handrafetana tapa-doko, mety tsara amin'ny fanaovana asa scissor mba hanesorana ireo marika scissor.
● Ity habe azo alaina ity dia 7,0 santimetatra misy nify 18, manify 65%. Ny halavany dia antonony, mety amin'ny ankamaroan'ny olona. Ny loko dia volafotsy sy mainty nopetahany takelaka. Raha mila loko na habe hafa ianao, azonay atao koa ny manamboatra azy ho anao. Azonao atao ny manome ny sary famantaranao, hanonta maimaimpoana ny logoo amin'ny hety izahay.
● Ny hety dia vita amin'ny vy tsy miova 440c, ary ny hamafin'ny vy dia manodidina ny 62 degre, izay mateza. Tsy mitovy amin'ny hety biby fiompy hafa eny an-tsena, ny hety fikolokoloana biby fiompy dia vita amin'ny firafitra vy tsy misy fangarony, izay afaka mampihena ny volo mikorontana, satria tsy ho tratra eo anelanelan'ny lelany ny volo. Ny hety fikolokoloana biby dia azo antoka ary mora ampiasaina ho an'ny alika, saka sns.
● Matetika izahay manome anao santionany maimaimpoana ho an'ny 1-2 PCS (Afa-tsy ny fanaingoana) dia mila ampandoavina ny vidin'ny fandefasana. Ho an'ny hety sarobidy dia hampandoavinay ny sarany santionany mifandraika amin'izany ary esorinay ny volan'ny santionany amin'ny kaomandinao manaraka.
7.0inch, nify 18
Famonoana titanium / poloney fitaratra / famolahana Matte
Teo aloha: SUS440C fikolokoloana fiompiana matihanina hety tena miolakolaka
Manaraka: 7,0 mirefy alika fikolokoloana alika fikoloana hety